Tarreeffama Amala Imalaa
Sanada Iccitii-dhuunfaa Pirojectii-Muraasaa
Eenyuutu qorannoo gaggeessa?
Maal sassaabaa jirraa?
RSGn qorannoo kanaaf odeeffannoowwan dhuunfaa murasa isin irraa sassaabee itti fayyadamuu barbaada.
Odeeffanno imalaa tii fi ndash; fakkeenyaaf, odeeffannoo imaloota isin gootan iddoolee sirrii, sa’atiiwwan imalaa, fi haaloota imalaa dabalatee.
Qubsuma hawaasaa tii fi ndash; eddattoon qo’annoo uummata naannoo qo’annoo sana calaqqisuu isaa mirkaneessuuf jecha fakkeenyaaf, sanyii, gosa, fi galii maatii.
Bareechisaa maatii keessanii tii fi ndash; fakkeenyaaf, eenyuutu maatii keessan keessa jira akkasumas miseensa maatii kana wajjii hariiroon teessan haala fudhaaf heeruumaa tii fi eenyummaa koorniyaa keessanii fi kan abbaa-warraa/haadha-warraa/jaalalee keesanii dabalatee.
Odeeffannoo qunnamtii tii fi ndash; fakkeenyaaf, dhimmaa yaadachiiftuuwwan qorannoo tii fi kaardiiwwan kennaa raabsuudhaa tiif teessoo Iimeelii yookiin lakkoofsa bilbilaa.
Qindaa’inoota kompitaraa – fakkeenyaaf, hanga argii meeshaa keessaniif qorannoo guutoluu dhaaf, teessoo IP kompitara keessanii tii fi qoronnoo wajjiin yemmuu wal qunname meeshicha adda baasuudhaaf iddoomaan fayyadamaa ni ribuu.
RSGn iccitummaan, amanamummaa fi eegumsa odeeffannoo dhuunfaa keeessanii eeguuf kutatoodha. Yoo seeraan gaafatame yookiin akkuma Sanada Iccitii-dhuunfaa Pirojectii-Muraasaa tii fi imaammata iccitii-dhuunfaa keenya irratti ibsameen malee odeeffannoo dhuunfaa isin irraa sassaabnu hin saaxillu yookiin qoonnu.
Akkamitti nuti data kan fayyadamna?
RSG fi Manni maree Magaalaa odeeffannoo keessan kan fayyadamaniif:
Sarxaawwanii fi amaloota imala naanno’oo hubachuu.
Manni maree Magaalaa akka investimantiilee geejjibaa qabatamoo dhiheessanii fi fooyya’iinsa feedhiiwwan naannootiif sirritti mijjaawuuf dursa akka kennaniif gargaara.
Waa’ee haala qo’annoo kessanii tiif akkasumas deeggarsa isiniif kennuuf isin qunnamu.
Xumuruu keessaniif onneessituu maallaqaa isiniif kennuuf isin qunnamu (yoo barbaachise).
Wayta odeeffannoon iccitii-dhuunfaa marti haqamee yemmuu gaafatametti akka kutaa dilbii-odeeffannoo qo’annoo dhiheessan Mana maree Magaalaa tiif hayyamaa.
Odeeffannoo kana eenyuu wajjiin qooddanna?
RSGn odeeffannoo keessan warreen wajji qooddatan:
Mana Maree Magaalaa
Damee Geejjibaa Minnesota
Damee Geejjibaa Wisconsin
Qorannoo kanaaf iimeelii baasuudhaaf dhiheessaa softiweerii ofummeessaa iimeelii
Deeggarsa qorannoo gaggeessuuf handhuraa bilbilaa
Meeshalee qorannoo maxxansanee erguu dhaaf mana maxxansaa
Kaardii kennaa xumuruu qorannoo baasuuf daldalaa kaardii keennaa
Hirmaannaa qorrannoo deeggaruuf dhaabbata walitti-dhufeenya hawaasaa tii fi hirmaannaa uummataa
Carraaqqii hirmaannaa uummataa tii fi xiinxala oodeeffannoo deeggaruuf dhaabbata gorsaa
Odeeffannoo kana dhiheessuuf onneessituu maallaqaanii maal kennitu?
Waliigala qorannoo kanaa akkuma xumurtaniin, akkaataa meeshaa qo’annoo itti xumurtan, qubsumaa hawaasaa garee keessanii ilaallatu hir’ina odeeffannoo, fi dursoota Mana Maree Magaalaa irratti hundaa’uu dhaan RSGn waraqaa ragaa kennaa gatiin isaa $10 - $25 tahu isiniif kenna. Akka (a) qorannoolee wal-fakkaataa irratti gatiin odeeffannoo ilaallatee ragaa seenaa, fi (b) deeggarsa maallaqaa maamilli keenya pirojeektii kanaaf nuu kenne fayyadamuudhaan heerragametti badhaasni kuni amantii gaarii RSGn tilmaama gatii odeeffannoon keessan Mana Maree Magaalaa tiif qabuu dhaati bakka-bu’a.
Hirmaannan keessan tolaani.
Qamoonni armaan olii hirmaataan tokkon tokkoo pirojektii keessatti argamuu dhiibbaa yookiin dirqaa malee akkasumas waada yookiin beenyaa RSG irraa osoo hin eegne hirmaannaa isaanii bilisaan keennaa jiraachuu isaaniirratti waliigalaniiru.
Yaada kee jijjiiruu ni dandeessa?
Eeyyen. irratti gama sirna nageeenya keenyatiin Gaaffii Odeeffannoo Iccitii-dhuunfaa galchuudhaan waliigaltee keessan keesuu yookiin mirga odeeffannoo keessan hojiirra olchuu ni damdeessan.
© 2021, Resource Systems Group, Inc. Mana Maree Magaalaa